आप्रवासी भिसामा अमेरिका आइसकेपछि ग्रिनकार्ड पाउन कति समय? यस्तो अवस्थामा हराउनसक्छ! « Khasokhas Follow @khasokhasmag
आप्रवासी भिसामा अमेरिका आइसकेपछि ग्रिनकार्ड पाउन लाग्ने समयबारे कैयनमा अन्यौल रहेको छ । कतिपयले ९० दिनभित्र ग्रिनकार्ड पाउने गरेका छन् भने कतिपयले प्राविधिक त्रुटीका कारण लामो समयसम्म ग्रिनकार्ड पाउन सकेका छैनन् ।
यदि आप्रवासी भिसामा अमेरिका प्रवेश गरेको व्यक्तिले अमेरिका आउनु अगाडि नै आप्रवासी भिसा शुल्क तिरेको छ भने उक्त व्यक्तिले अमेरिका प्रवेश गरेको ९० दिनभित्र ग्रिनकार्ड प्राप्त गर्छ । जसको अर्थ कतिपयले एकमहिनाभित्रै पनि प्राप्त गर्न सक्छन् भने बढीमा ९० दिनसम्म लाग्नसक्छ ।
यदि आप्रवासी भिसामा अमेरिका प्रवेश गरेको व्यक्तिले अमेरिका प्रवेश गरेपछिमात्र आप्रवासी भिसा शुल्क तिरेको छ भने त्यस्तो व्यक्तिको ग्रिनकार्ड आउनमा ढिलो हुनसक्छ । अमेरिकाभित्र प्रवेश गरेको मितिले नभई उक्त व्यक्तिले आप्रवासी भिसा शुल्क तिरेको मितिले ९० दिनभित्र ग्रिनकार्ड प्राप्त गर्नसक्छ ।
तर यदि कोही व्यक्तिले आप्रवासी भिसामा अमेरिका आइसकेपछि पनि आप्रवासी भिसा शुल्क तिरेको छैन भने उसले उक्त शुल्क नतिर्दासम्म ग्रिनकार्ड प्राप्त गर्न सक्दैन । कतिपय व्यक्तिले थाहा नपाएरै यो शुल्क नतिरेका कारण ग्रिनकार्ड प्राप्त गर्न नसकेका उदाहरण्ण समेत छन् । आप्रवासी शुल्क तिर्नका लागि यहाँ क्लीक गर्नुपर्छ ।
यदि कोही व्यक्तिले आप्रवासी भिसा आवेदन फर्ममा फरक ठेगाना उल्लेख गरेको थियो तर अमेरिका आइसकेपछि अर्कै ठेगानामा गयो भनेपनि उसको ग्रिनकार्ड हराउन सक्ने सम्भावना रहन्छ । आप्रवासी भिसा आवेदन फर्ममा उल्लेख गरेकै ठेगानामा ग्रिनकार्ड जाने भएकाले आवेदक त्यहाा नबसेको खण्डमा उक्त ठेगानामा पुगेको ग्रिनकार्ड हराउन वा फिर्ता जान पनि सक्छ ।
त्यस्तै आवेदनमा ठेगाना अधुरो भएको खण्डमा पनि ग्रिनकार्ड हराउनसक्ने वा फिर्ता जानसक्ने सम्भावना रहन्छ । कहिलेकाँही ठेगानामा घर नम्बर गलत राख्ने वा अपार्टमेन्ट नम्बर उल्लेख नगर्ने गर्दा यस्तो समस्या हुने गरेको छ ।
ग्रिनकार्ड हराएको खण्डमा नयाँ ग्रिनकार्डका लागि आई ९० फर्म भर्न सकिन्छ । १० बर्षको ग्रिनकार्ड नविकरणका लागि साढे १२ महिनासम्म र हराएको वा च्यातिएको ग्रिनकार्डको सट्टामा नयाँ ग्रिनकार्ड प्राप्त गर्न साढे १६ महिनासम्म अवधि लाग्ने गरेको छ ।
गत नोभेम्बर १ देखि युएससीआईएसले कुनै पनि आवेदन प्रकृयामा लैजान लाग्ने अवधि ६ महिनाको तथ्यांकको आधारमा गणना गर्न थालेको छ । यसअगाडि मासिक तथ्यांकका आधारमा गणना गरिदै आएको थियो ।